ISILO sikhuthaze abesifazane ngokuvikela umhlaba – Ubukhosi
Home/ Imigidi Nemikhosi/ISILO sikhuthaze abesifazane ngokuvikela umhlaba
Abesifazane eMkhosini weSivivane. Isithombe: KZNDAC
Inkulumo yeSILO eMkhosini weSivivane eSigodlweni kwakhangela, kwaNongoma mhla zi-3 kuNcwaba ngowezi-2019
INdlunkulu ekhona phakathi kwethu, aMakhosi nezinhlaka zoBukhosi, izikhulu zonke zikaHulumeni ngokwezigaba zazo, bomama, Zulu ondlela zimhlophe!
Kuhlale kuyintokozo ukuba nalo msebenzi ohlanganisa omama bakaZulu nababeNguni jikelele. Ngigcizelela leli labeNguni ngoba nginesiqiniseko sokuthi kulo msebenzi akugcini nje kuphela kunomama abavela kweleNdlovukazi uMthaniya kepha kukhona nabavela ngaphandle kwemingcele. Kulabo abakhona abavela ngaphandle kwemingcele ngiyabingelela ngokukhethekile, namukelekile kwaZulu, kweleZilo neZindlovukazi neZinyandezulu.
Ngiyazi futhi ukuthi phakathi kwethu namuhla kukhona nabahlobo bethu abayizintatheli abavela ezindlini ezahlukene zabezindaba. Siyamukela ukuthi leli butho lihlale lihambela imisebenzi yethu ngezizathu ezahlukene. Nakubo siyabingelela sethembe ukuthi leli butho lizozinika isikhathi esanele sokuqonda ngathi njengoZulu.
Lokhu ngikusho ngoba kuyanda ukungaqondi ngathi nokuphetha ngokuthi kubikwe okungeyikho ngathi nangamasiko ethu. Akulona ihlazo ukungazi, kepha okuyihlazo ukungabuzi. Ubungcwele bokubuza uma ungazi kwenza wazi ukuze ukhulume noma ubhale okwaziyo. Kungumsebenzi wenu bomama ukufundisa izingane zenu lezi eziyizintatheli ngesiko lethu. Nakuzo ngithi azisondele ukuze zincele konina.
Lo msebezi wale mpelasonto umqoka ngoba wenzeka ngentwasahlobo lapho izwe lonke ligubha ubumqoka babantu besifazane phakathi kwethu. Thina lapha kwaZulu asibabungazi nje ngale nyanga kuphela kepha sibazisa zonke izinsuku ngoba yibo abenza uZulu. Lobu bumqoka bakho ubuthola emlandweni wethu lapho sikhuluma ngeZindlovukazi naMakhosazane alesi sizwe, uphinde ubezwe ngisho kunkolosiko yethu lapho sibaphakamisa emsamo bengogogo. Ngalo usikompilo lwethu siyamxusa uNomkhubulwana esimamukela njengeNkosazane yeZulu. Size sethe izwe leli lethu ngeNdlovukazi uMthaniya.
Uma lokhu kungafundisi ngathi nokusondelana kwethu nabesifazane okusho ukuthi akukho okunye okuyofundisa umuntu ngathi. Njengoba ngasho mhla sivula iSishayamthetho saKwaZulu-Natal ukuthi thina sizalwa yizigomagoma zabesifazane esingadinge kufundiswa ngazo.
Kungithokozisile ukuqondana kwalo msebenzi wenu kanye nokubuya kwami ohambweni lwezinsuku ezili-12 kwelamaNgisi. Lolu kube wuhambo olube luhle kakhulu nayilapho ngiqhakambise khona intuthuko ezindaweni zasemakhaya nezisondele kakhulu empilweni yami. Kusemakhaya lapho mina ngazalelwa khona ngakhula ngaze ngaba yilokhu engiyikho phakathi kwenu.
Ezinkulumwnei zonke zami engizethule e-United Kingdom angibanga namahloni ukukhuluma ngani ngisho khona ukuthi nifanelwe ngokugcono. Yebo omama emakhaya bafanelwe yingqalasizinda engcono, imfundo engcono, nobuholi obungcono. Ngiphakamisa leli lobuholi ngoba uma ngilalela nje iningi labaholi lingena ngenxa yenu kepha niphinde nicindezelwe yibo abaholi uma sebeshaya imithetho ephikisana nokuphila kwenu kwansuku zonke. Umbuzo uthi bayanazi yini ?
Sifike kuleli lizwe sivela phesheya sahlangabezana nezinkulumo ezithi abathile abanganazi, abangaphili phakathi kwenu nabangakwazi ukuphila kwenu kwansuku zonke sebenqumile ukuthi umhlaba wenu oselokhu kwathi nhlo niseyizintombi nakhu namuhla niyaguga wenganyelwe ngenqubo yoMdabu awuphathwe ngendlela eyahlukileyo.
Mina engamila phakathi kwenu, engakhulekelwa yini ngakhulela phambi kwenu ngaze ngakhonjwa wumunwe womlando angikaze ngithintwe ngalokhu. Ngizwa nje kuthiwa insimu le yenu okuwumhlaba izodatshulwa iphathiswe abantu abanye abazivumela bona ukuthi bagwamandiwe njengoba kuneKhomishini nje yokugwamandwa kombuso.
Awu! Bomama, noma sengimubi ngaleyo ndlela sekungathiwa sukani eBukhosini lapho kungantshontshwa khona niye kubantu okusho izinkantolo nemibiko yophenyo ukuthi ngamadoda nabafazi ongeke ubethembe.
Cha kodwa ngithe
Uma ngizwa yize umbiko lo sisawubheka ngabona ukuthi kabanazi impela laba bantu, bacabanga khona ukuthi niyizimvu nje ezinhle uma kuvotwa. Kabazi ukuthi umhlaba lo wobaba ungowenu, ungowezingane zenu nabayeni benu. Okwamanje la maqhude ukuzibeka ngiwashiya kini ngoba anilingene, anganani.
Kimi bomama anibona abavoti kepha njengoba ngasho eminyakeni eyedlule ukuthi ningoNomathemba balesi sizwe. Ngiyazi ukuthi lezi kuZulu nakimi qobo yizikhathi zokulingwa, ngiseGetsemane. Nina ninjengabafundi ngithi kini ningozeli njengoba ngisakhuphukele entabeni nje, ngisajube ukuthi udaba lolu luke lubukwe ngelibanzi ngithi yazini ukuthi leli leZingonyama neZindlovukazi lingefe ngani, futhi lingefe ngesami nangesenu isikhathi.
Ngifunga ngengane yakwethu uNonhlanhla ongomunye wabesifazane owathunga le mbenge, ngithi lingeke lihambe ngesenu isikhathi!
Okuningi ngizokukhuluma ngoMkhosi WoMhlanga mhla ziyisi-7 kuMandlulo. Ngibeka llsi sikhathi ukunika zonke izinhlaka zoBukhosi isikhathi esanele sokwetshisa lo muga nokufakwa kwethu umunwe esweni. Ngiyazi kunabafuna siphawule ngendlela nangesikhathi bona abathanda ngaso, kulabo ngithi uZulu akakaze abe wudibi angeke aqale manje.
Nakuwo uZulu ngithi bhekani kimi, bukani ukuthi nginyathela ngiya ngaphi kulolu daba. Engiyikho ngiyazi ukuthi akuyona into yomuntu. Ngiyabazi futhi nabaniniyo bayakwazi ukuziphendulela ezitheni. Kokunye kabadingi mina ukuthi genze okuthile.
Kule mpelasonto ngifisa nizinike izikhathi esanele sokumunyunga ngobumqoka bomhlaba kini namuhla nasezizukulwaneni zenu. Yilungelo lenu ukwenza njalo. Lena kaNcwaba akube ngeyokubonisana ngengubo yenu, okuwumhlaba kaZulu abathi okhokho benu endulo angibalondele yona egameni lesizwe sonke. Kukhona abathi ayisanifanele, abathi oyihlo nokhokho benu benza iphutha endulo. Kusho abantu abanganazi, abangazi lapha nihlala khona, ukuthi nizalelelwe kuphi, nakhulela kuphi, naganela kuphi, nakhulisa obani, bona bakhulisa obani. Abagabe ngakho nje wukuthi bona bazi isiNgisi futhi bafundile.
Akuqali ke ukuthi abantu baseye kanjena Zulu, kwaba yiso leso eminyakeni eli-140 eyedlule. Angikho lapha ukuzofundisa ngalowo mlando. Njengoba ngishilo angizokusho konke namuhla uyeza uMkhosi wamadodakazi enu eNyokeni nayilapho ngizokusho konke.
Ngala magama amafushane nginifisela ukubonisana nokufundisana okuhle. Khumbulani nina ningoNomathemba, ngithi thathani indawo yenu esizweni.